ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ တေဇရဲ့ Air Bagan လေကြောင်းလိုင်းရုံးရှေ့မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများမှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်... ~ ဒီမိုဝေယံ
ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ တေဇရဲ့ Air Bagan လေကြောင်းလိုင်းရုံးရှေ့မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများမှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်...
ချင်းမိုင်ရှိ တေဇပိုင် Air Bagan ရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ့အရေးထောက်ခံသူ နိုင်ငံခြားသားများ
ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ်ချိန်မှာ Air Bagan ဝန်ထမ်းတွေ တံခါးတွေ မီးတွေ ပိတ်ပြီး အထဲမှာကုပ်နေပါတယ်..။
တေဇရဲ့ AirBagan ရုံးရှေ့ကိုတော့လျှက်တစ်ပြက် သွားရောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ..။
ဒါ့အပြင် အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ဆော်သြခဲ့ပါတယ်..။
boycott of the upcoming election in Burma 'Real Election, notaMilitary
တေဇရဲ့ Air Bagan ကိုသပိတ်မှောက်ဖို့ လှုံဆော်တဲ့ ကမ်ပိန်းကို ချင်းမိုင် ရှိလူစည်ကားရာ ဘတ်(စ်)ကားဂိတ်များနဲ့ ဈေးများ နိုင်ငံခြားသားတွေ အများဆုံးရှိတဲ့ နေရာများ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ရှိရာနေရာများ မှာ လိုက်လံဝေငှခဲ့ပြီး.. ("Hey, Hey! No, No! Air Bagan has got to go!") ဒီလို Sologans တွေ တိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
တေဇရဲ့ဒီ Air Bagan ရုံးဟာ ချင်းမိုင်မှာ ဒီနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာ ဖွင့်ခဲ့ပြီး တပတ်ကို နှစ်ကြိမ် ချင်းမိုင်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ပျံသန်း ပြေးဆွဲနေပါတယ်..။
ဒီပွဲကို ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သူကတော့ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား Mr.Garrett Kostin ဖြစ်ပြီး ချင်းမိုင်မှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မိတ်ဆွေကောင်း စာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ပြီး.. ဦးစီးဦးဆောင် ပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်...။ Mr.Garrettဟာ ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြို့နယ် ၁၅ခု၌ွ်မြန်မာပြည်အမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေ(Peace In Burma Now) ငြိမ်းချမ်းရေး စတစ်ကာကပ်မှုကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားတဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်များမှ မေလ(၃)ရက်နေ့မှာ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာမပြည့်မှီ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်...။
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတဲ့ Mr.Garrett ရဲ့ ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက မြန်မာပြည်တွင်း မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စတစ်ကာ ကမ်ပိန်းအကြောင်း ပြန်ဖတ်ချင်ရင်..
အမေရိကန်နိုင်ငံသား Mr.Garrett Kostinရဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေး စတစ်ကာများ
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး စတစ်ကာတွေ ကပ်ခဲ့တဲ့ Mr. Garrett နဲ့အင်တာဗျုး (ပထမပိုင်း)..
မြန်မာပြည်တွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းရေးစတစ်ကာ ကပ်ခဲ့သူ Mr.Garette နှင့် အင်တာဗျူး( အပိုင်း ၂ ) ...
Mr.Garrett ရဲ့ ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လို အပြည့်အစုံ အောက်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်..။
*'Boycott Air Bagan' Campaign Launched in Chiang Mai*
Todayagroup of Burmese and international activists withaconcern for the people of Burma launchedacampaign in Chiang Mai, Thailand, calling foracomplete boycott of Air Bagan,aBurmese airline with close ties to the Burmese military regime, as well as other businesses that support and sustain the military dictatorship in Burma.
A protest demonstration was conducted in front of Air Bagan's Chiang Mai office early in the afternoon. Almost immediately after the protest began, the staff of Air Bagan locked the front door and shut off their lights. The office remained closed for the rest of the day.
Air Bagan opened its office in Chiang Mai earlier this year, and has been running twice-weekly direct flights from Chiang Mai to Rangoon. Chiang Mai isakey part of Air Bagan's plan to increase its international market share after failed attempts to sustain international routes to and from Singapore and Bangkok.
The group also took today as an opportunity to add their voices to those calling foraboycott of the upcoming election in Burma. They displayed posters from Burma Partnership calling fora'Real Election, notaMilitary Selection'. In speeches and interviews with the media, representatives urged all citizens of Burma to protest this mockery of democracy in any way they are able.
After blowing whistles, distributing information, readingastatement, and chanting slogans ("Hey, Hey! No, No! Air Bagan has got to go!") for approximately 45 minutes, the group headed down Chang Klan Road to Loi Kroh Road,abusy street with many foreigners and tourist information centers, all the while passing out brochures and carrying posters of Aung San Suu Kyi.
The group has plans to continue their "Boycott Air Bagan" campaign by continuing to distribute information to Thai travel agencies and tour operators in Chiang Mai, along with Thai-language versions of “Forbidden Glimpses of Shan State”,areport produced by Shan Women’s Action Network (SWAN) about the adverse effects of state-sponsored tourism in Shan State.
Future actions will also focus on distributing information to tourists at Chiang Mai's busy bus station and Night Bazaar. The group also has plans to conduct more surprise demonstrations at the Air Bagan office in Chiang Mai.
The Best Friend Library – Chiang Mai
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အမြဲအားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေကြီး Mr.Garrett နဲ့ ပြန်လည်ပေးပို့ပေးတဲ့ ညီငယ် အလင်းဆက်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
Tay Za ရဲ့ Air Bagan Sale Promotion ကြော်ငြာတစ်ခုပါ.. Mr.Garrett ရေ